သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကိုက တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး Mr. Luo Shu Gang ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို မြန်မာသမိုင်းအဖွဲ့ လစဉ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြတိုက်များရှိ ပန်းချီများနှင့် အဝတ်အထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အနုလက်ရာပစ္စည်းများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ထားသိုခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ပုဂံအနုပညာပွဲတော် Art Expo Bagan 2020 ကို ပုဂံရှေးဟောင်း သုတေသန ပြတိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကြည်မင်း ဦးဆောင်သော သုတေသနကွင်းဆင်းလေ့လာရေးအဖွဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရွာငံမြို့နယ်ရှိ ပြဒါးလင်းဂူအား ကွင်းဆင်းလေ့လာသုတေသနပြုခြင်း
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကြည်မင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အအိချိခရိုင်၊ နာဂိုယာမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ထားသည့် မစ္စတာတိုရှိအိုနီရှိမူရနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
မြန်မာအကအခြေခံကဗျာလွတ်အက(ပထမအဆင့်)ဆင့်ပွားနည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၉) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
“မြန်မာ့အစဉ်အလာဓလေ့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း” သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲအား နေ့ရက်ပြောင်းလဲ၍ ကျင်းပခြင်း
“မြန်မာ့အစဉ်အလာဓလေ့ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း” သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ဖတ်ကြားရန်အတွက် သုတေသနစာတမ်းများအတည်ပြုရွေးချယ်ခြင်း
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို ရှေးဟောင်းဓနုဖြူ ခံတပ်အုတ်ရိုးအားကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသ SiteManagerများ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)ဝင်းအတွင်း လုပ်ငန်းဆက်အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား Third Partyအဖွဲ့မှ လာရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးခြင်း (မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ရက်)